Bogga ugu weyn 25 Goobood oo ugu Fiican oo Ku Shaqaaleysiiya Markaad 15 Sano Jirto ama Ka Yar | 2022 Liiska
Waxaad halkaan u joogtaa qoraalkan sababtoo ah waxaad la yaaban tahay haddii ay jiraan meelo shaqaaleysiiya 15. Waa hagaag, waxaad joogtaa meesha saxda ah maxaa yeelay waxaa jira meelo badan oo shaqaaleysiiya 15-jir si simanna u siiya mushaarka ugu yar.
Haddii aan hore u garan lahaa, Yaa garanaya, malaha waxaan lahaan lahaa gaadhigaygii ugu horreeyay 18 jir.
Si aad u ogaato, waa caadi inaad rabto inaad shaqo hesho, cidna ma dhaawaceyso. Xitaa waxaa jiri kara dhowr sababood oo ah sababta aad ugu baahan tahay shaqo. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad u kaydiso kulliyadda ama ka caawiso biilasha, ama u kaydsato Kirismaska ​​ama xitaa hesho dhar aad u fiican.
Sabab kasta ha lahaato, kaliya ogow inaysan khalad ahayn.
Taa bedelkeeda, ka shaqaynta sidii dhallintaada waxay leedahay faa'iidooyin badan. Waxay kuu diyaarineysaa suuqa shaqada, waxay kaa caawineysaa inaad fahanto qiimaha lacagta, oo xitaa ku baraya mas'uuliyadda shaqada.
Sidaa darteed, maqaalkan, waxaan ku tusi doonaa qaar ka mid ah meelaha laga kireeyo 15, sii wad akhriska!
Waa maxay Sharciyada Shaqada Apsi aad u ilaaliso 15 jirka Ama Ka Yar?
Haddii ay tahay inaad shaqo hesho adigoo 15 jir ah, waxaa muhiim ah inaad taqaano sharciyada federaalka ee ku khuseeya. Heerka Cadaaladda Shaqaalaha ee Cadaaladda (FLSA) oo hoos timaada Waaxda Shaqada ee Maraykanka (DOL) waxay u qaabaysay sharciyadan inay kaa ilaaliso ku -shaqaynta carruurta.
Sharcigu wuxuu dejinayaa mushaharka, saacadaha la shaqaynayo, iyo shuruudaha badbaadada ee carruurta aan qaangaarka ahayn (shakhsiyaadka ka yar da'da 18) ee ka shaqeeya shaqooyinka ay daboolayso waaxdu.
Sida laga soo xigtay FLSA da'da ugu yar ee shaqadu waa 14 sano shaqooyinka aan ku lug lahayn shaqada beeraha ama xirfadaha mashiinka dhaqaajinta. FLSA waxay kaloo mamnuucday in shaqaalaysiinta carruurta aan qaangaarin shaqooyinka ay waaxdu ku sheegtay inay halis yihiin.
In kasta oo kuwani yihiin sharciyo federaal ah, haddana gobol kastaa wuxuu leeyahay xeerar u gaar ah oo ku saabsan shaqaalaynta carruurta aan qaangaarin. Xaaladda ay isku dhacaan sharciga FLSA iyo kan gobolka labadaba, sharciga sida ugu fiican u ilaaliya ilmaha ayaa la adeegsadaa.
Immisa saacadood ayuu shaqayn karaa 15 jir ama ka yar?
FLSA waxaa ku jira tirada ugu yar ee saacadaha shaqada ee loogu talagalay carruurta ka yar 16 sano sharciga waxay sheegaysaa in “dhalinyarada 14 iyo 15 sano jir ah ay ka shaqayn karaan saacadaha dugsiga ka baxsan shaqooyin kala duwan oo aan wax-soo-saar lahayn, aan macdan-qodnayn, aan halis ahayn marka la eego xaaladaha qaarkood.”
Sidaa darteed, saacadaha shaqada ee la oggol yahay ee loogu talagalay carruurta aan qaangaarka ahayn ee ka yar 16 sano sida ay tilmaantay FLSA waa:
3 saacadood maalin dugsiyeedka;
18 saacadood toddobaadkii dugsiga;
Saacadaha aan dugsiga ahayn
8 saacadood maalin aan dugsi ahayn;
40 saacadood toddobaadka aan dugsiga ahayn; iyo
Inta u dhaxaysa 7 subaxnimo iyo 7 galabnimo, marka laga reebo Juun 1 ilaa Maalinta Shaqaalaha, marka saacadaha shaqada habeenkii la kordhiyo ilaa 9ka fiidnimo
Markaad gaartid 16, qaar ka mid ah sharciyadaan adiga laguma dabaqi doono.
Markaad tan ogaato, aan aragno inta aad kasban karto adigoo 15 jir ah.
Intee in le'eg ayay heli karaan 15 jirka ama ka yar?
Mushaharka ugu yar ee caadiga ah ee uu dejiyay Sharciga Heerarka Halbeegga Shaqada (FLSA) waa $ 7.25 saacaddii oo dhammaan gobolada ay u hoggaansamaan xeerkan.
Si kastaba ha ahaatee, shaqaalaha da'doodu ka yar tahay 20 sano, mushaharka ugu yar ee ay dejisay Xeerka Heerarka Shaqada ee Fair Fair (FLSA) waa $ 4.25 saacaddii 90 -kii maalmood ee ugu horreeyey ee isku xigxiga ee maalmaha shaqo ee loo shaqeeyaha.
Marka shaqaaluhu gaaro 20 sano ama 90 maalmood oo shaqo kadib, shaqaaluhu waa inuu qaataa mushaharka ugu yar. Tani kuma koobna loo -shaqeeyahaaga koowaad. Mar kasta oo aad beddesho loo-shaqeeyayaasha adiga oo weli ka yar 20 jir, waxaad heleysaa mushaharka ugu yar- $ 4.25 saacaddii.
Dawladaha qaarkood waxay leeyihiin shuruucda mushaharka ugu yar oo ka duwan FLSA oo mararka qaarkoodna ka sarreeya. Sidaas oo kale sida saacadaha shaqada, marka sharciyada FLSA iyo sharciyada gobolku is -dhaafaan, heerka sare ayaa khuseeya.
Fiiro gaar ah: Qaar ka mid ah ardayda saacadaha buuxa, bartayaasha ardayga, tababbarayaasha, iyo shaqaalaha naafada ah ayaa laga yaabaa in la siiyo wax ka yar mushaharka ugu hooseeya iyadoo la raacayo shahaadooyin gaar ah oo ka socda Xoghayaha Shaqada. Tan caadi ahaan waxaa loogu yeeraa mushaharka ugu hooseeya.
Hadda waad ogtahay inta aad ku kasban karto adigoo 15 jir ah, waa xaq u leedahay inaad ogaato meelaha shaqaaleysiiya 15 jir. Tani waxay noo horseedaysaa dooddeena xigta.
Waa Maxay Meelaha Laga Shaqaaleeyo Markay Jiraan 15 Sano?
Waxaa jira meelo badan oo aad ku shaqayn karto adigoo 15 jir ah. Inkasta oo qaar ka mid ah loo -shaqeeyayaashu ay xoogga saaraan waayo -aragnimada, haddana waxaa jira meelo diyaar u ah inay ku shaqaaleeyaan 15 iyadoon loo eegin heerka khibradaada.
Maskaxda ku hay in qaar ka mid ah goobaha meheradahaani ay go'aaminayaan haddii laguu shaqaaleysiin doono 15 jir ama ka yar.
Halkaan waxaa ah liiska shaqooyinka qaarkood oo shaqaaleysiiya 15.
McDonald's waa mid ka mid ah shirkadaha cuntada ee ugu waaweyn Mareykanka oo si fiican loogu yaqaan hamburgers, cheeseburgers, iyo fries french. Iyada oo leh in ka badan 13000+ laamood oo ku yaal Mareykanka, waxay noqotay meesha ugu caansan ee loogu talagalay 15-jirka ama ka yar meelaha raadinta inay ka shaqeeyaan.
In kasta oo da'da ugu yar ee shaqada McDonald's ay tahay 14, waxay kaliya quseysaa dowladaha u oggolaanaya. Waxaad u shaqayn kartaa sida cunto -kariye, nadiifiye ama shaqaale.
Si aad wax uga ogaato shaqooyinka la siiyo 15-jirka McDonald's, guji badhanka hoose.
Baskin Robbins waa jalaatada ugu sareysa iyo xayeysiiska macmacaanka barafeysan ee Mareykanka. Waxay caan ku yihiin inay abuuraan jalaato cusub oo heer sare ah, macmacaan barafeysan oo khaas ah, iyo cabitaanno.
Iyada oo leh in ka badan 3000 dukaamo tafaariiqeed oo ku yaal Mareykanka, waxay u abuuraan fursado shaqo shaqsiyaadka da'doodu tahay 14 jir.
Marka, haddii aad raadinayso shaqo fasax xagaaga adiga oo 15 jir ah, robbins-ka Baskin wuxuu noqon karaa meel fiican oo la eego. Waxaad u badan tahay inaad u adeegi doonto jalaato, keega, iyo cabitaannada.
Si aad u aragto sida loo codsado Baskin Robbins, guji badhanka hoose.
BOOQO ROBBINKA BASKINKA
Dadka akhriya nuxurkan ayaa waliba akhriya Maareynta Lacagta ee Dhallinta 101: Sida Lacag Loo Kaydsan Karo Dhallinyarada
Chick-Fil-A waa mid ka mid ah makhaayadaha caanka ah ee Maraykanka ee u adeegsada digaagga sandwichkooda. Iyadoo in ka badan 2000 oo laamood, waxay siiyaan fursado shaqo oo badan shakhsiyaadka raba inay la shaqeeyaan. Xataa kuwa da'doodu ka yar tahay 15 jir.
Qaybta wanaagsan ee ka shaqaynta Chick-Fil_-A waa inaysan shaqayn Axadaha. Kani waa dhaqan ay ku dhaqmeen tan iyo 1946. Waxaad codsan kartaa sida shaqaalaha jikada.
Guji badhanka hoose si aad wax badan uga ogaato shaqooyinka Chick-Fil-A.
Arby's waa makhaayad cunto-degdeg ah oo caan ku ah hilibkiisa Angus iyo rooti turki duban oo duban.
Waxay meel gaar ah ku leeyihiin warshadaha makhaayadda oo si dhakhso leh ayaa loo farsameeyay. Arby ahaan, in si degdeg ah loo farsameeyo micnaheedu waa cunto tayo leh oo la awoodi karo oo si dhaqso leh haddana si xirfad leh loo diyaariyey.
Iyada oo leh in ka badan 3000 laamood oo ku yaal Mareykanka, Arby wuxuu u shaqeeyaa sidii xornimo madaxbannaan wuxuuna siiyaa fursado shaqo kuwa doonaya inay shaqeeyaan. Waxaad u shaqayn kartaa sidii xubin shaqaale.
Si aad wax badan uga ogaato shaqooyinka Arby's, guji halkan.
Kroger waa mid ka mid ah dukaamada silsiladda raashinka ee caanka ah ee Maraykanka. Waxa intaa dheer tan, waxay leeyihiin bakhaarro kale oo caan ka ah Mareykanka sida Fry's, Smith's iyo King Scoopers.
Si aad uga shaqayso Kroger, waa inaad marka hore ogaataa haddii sharciga gobolku u oggolaanayo loo-shaqeeyayaasha inay shaqaaleeyaan 15-jir. Haddii ay sidaas tahay, markaa waxaad codsan kartaa inaad ka shaqeyso Krogers sida kaydiyaha, boorsada, ama nadiifiyaha.
Baro wax badan oo ku saabsan ka shaqaynta Kroger halkan
#6. Lix Calan
Six Flags wuxuu leeyahay in ka badan 20 jardiinooyin oo ku yaal Mareykanka, Mexico, iyo Kanada oo leh xeebo heer caalami ah, raacitaan qoys oo da 'walba leh, la kulanka xayawaanka ee dhow, iyo jardiinooyin biyo oo xiise leh.
Waxaad shaqo ka heli kartaa Lixda Calan sida Xubinta Kooxda U -hoggaansanaanta Yar halkaas oo aad ka shaqayn karto Ogolaanshaha, Tafaariiqda, Ciyaaraha, ama Adeegyada Cunnada. Si kastaba ha noqotee, shaqooyinka ayaa ku kala duwan goobta iyo xilliga.
Si kastaba ha ahaatee, guji badhanka si aad u ogaato ilaa lix calan.
BOOQO Lixda CALAN
#7. Tiyaatarka AMC
Yaa !! Waa waqtigii shineemada. Waan jeclahay inaan aado shineemooyinka. Salool, boorjarka, farxadda wajiga qof walba oo muujinaysa qanac, gebi ahaanba waan jeclahay inaan taas arko.
Hadda malee maxaa? waxaad ka shaqayn kartaa shineemada xataa adigoo 15 jir ah. Tiyaatarka AMC wuxuu siiyaa shaqo dadka da'doodu u dhaxayso 14-17 si waafaqsan tilmaamaha federaalka.
Laakiin sababta oo ah sharciyada shaqada ee gobolku way kala duwan yihiin, waxaa muhiim ah inaad ka hubiso masraxa deegaankaaga si aad u ogaato haddii sharciga gobolku kuu oggol yahay in lagu shaqaaleeyo.
Hadday sidaas tahay, waad sii socon kartaa oo codsan kartaa inaad ka shaqayso Tiyaatarka AMC sidii lacag -haye ama soo -dhoweye.
Ka eeg xiriirka hoose macluumaad dheeri ah.
BOOQO TIYAARAyaasha AMC
Arag tani Shaqooyinka ugu mushaarka badan 16 sano Shaqaalaynta hadda
#8. Gorgor weyn
Giant Eagle waa dukaan raashinka oo leh in ka badan 200 dukaan oo ku yaal Mareykanka oo dhan. Waxay shaqaaleysiiyaan 15 jir si ay ugu shaqeeyaan sidii karraaniga roodhida ama adeegaha gaadhiga dukaameysiga. Laakiin shaqooyinkani waa kuwo xilliyeed waxayna ku kala duwan yihiin goob ilaa goob.
Marka, guji xiriirka hoose si aad u aragto shaqooyinka laga heli karo Giant Eagle.
BOOQO GEANTI GIANT
Publix waa mid ka mid ah kuwa ugu weyn dukaamada silsiladda raashinka ee shaqaalaha ee Maraykanka.
Iyada oo leh in ka badan 1000 dukaan oo ku yaal gobolka Koonfur Bari ee gobollada sida Florida, Georgia, Alabama, South Carolina, iwm, Waxaad filan kartaa inaad shaqooyin ka hesho sida boorsooyinka, karraaniyaasha miiska adeegga, iyo khasnajiyeyaasha 15 jirka ah.
Si kastaba ha ahaatee, shaqooyinkani waxay ku xiran yihiin sharciyada gobolka iyo helitaanka jagooyinka.
Guji badhanka hoose si aad u aragto shaqooyinka laga heli karo Publix.
Fareway waa shirkad raashin ka iibisa Midwest ee Maraykanka. Waxay leedahay in ka badan 120 dukaan oo ka shaqeeya Iowa, Illinois, Minnesota, Missouri, Nebraska, iyo South Dakota.
Markay tahay Fareway, waxay shaqaaleeyaan 15 jir si ay uga shaqeeyaan waaxyadooda raashinka waana inaad tahay 18 jir iyo ka weyn inaad ka shaqayso Waaxda Hilibka ama Waaxda Foornada.
Guji badhanka hoose si aad u aragto shaqooyinka ka jira Fareway.
#11. Socod Ey
Haddii aad tahay qof jecel xayawaanka ama aad guud ahaan jeceshahay eeyaha, waad tixgelin kartaa eey soco sida mid ka mid ah shaqooyinka adeegga in la sameeyo. Socodlaha eeygu wuxuu caadi ahaan joogsadaa guriga qofka wuxuuna u daayaa eygooda si uu jimicsi ugu sameeyo socodka. Kadib, (yaasha) wuxuu eeyga u celiyaa milkiilaha.
Tani waxay noqon kartaa madadaalo shaqo waqti dhiman ah adiga. Waxaad abuuri kartaa xayeysiisyo madadaalo leh waxaadna u dhiibi kartaa saaxiibbadaada iyo qoyskaaga xayeysiinta meheraddaada.
Waxaad soo bandhigi kartaa inaad eeyga deriskaaga dibadda u soo baxdo oo aad lacag ku hesho.
Samee shaqo fiican oo mar dhow dadku waxay kuu gudbin doonaan adeegyadaada.
#12. Nadiifinta Guriga
Urrrrghh… Runtii ma jecli shaqooyinka guriga. Waxay noqon kartaa mid caajis iyo daal mararka qaarkood. Laakiin mar walba waxaa jira Hooyo oo dooneysa inaad hagaajiso guriga.
Ka warran adiga oo lacag ka sameeya?
Habka wanaagsan ee lagu helo xoogaa xoogaa lacag ah oo dheeraad ah oo ka baxsan dugsiga waa inaad u soo bandhigto inaad u samayso nadiifinta guriga kuwa kale. Ha ka welwelin, waxaa jira sharciyo federaal ah oo dejinaya waqtiga aad shaqeyn doonto sidaa darteed looma baahna in la cabsado.
Hase yeeshee, waxaa fiican inaad hesho takhasus aad si joogto ah u samayn karto. Waxaa laga yaabaa in nadiifinta Vacuum -ka ama wax kasta oo aad u malaynayso inay raaxo yihiin. Ma rabtaa inaad ogaato sababta?
Markaa waxaad kasban kartaa lacag intaa ka badan! muraayado!
Oo Haa! Sideen ku ilaawi karaa inaan xuso Swagbucks? Swagbucks waa madal onlayn ah oo kuu oggolaanaysa inaad lacag ku hesho qaadashada sahannada internetka, daawashada fiidiyowyada internetka, oo aad qiyaastid maxaa? soo dejinta barnaamijyada sidoo kale.
Waxaa laga yaabaa inaad jeceshahay inaad gudaha la joogto laptop -kaaga. Waa caadi; waxaad sidoo kale lacag ku samayn kartaa taas.
Markaa iska qor Swagbucks si aad u bilowdo qaadashada sahaminta iyo sameynta waxyaabo kale. Waxaad helaysaa dhibco ka dib markaad dhammaystirto hawlahaaga oo waxa ugu qabow oo dhan waa inaad ku soo iibsan kartaa dhibcahaas lacag caddaan ah PayPal. Weydii waalidkaaga ama mas'uulkaaga inay kuu sameeyaan xisaabta ardayga ee PayPal.
Waxaan kugula talinayaa inaad tan soo marto Dib u eegista Swagbucks ka hor intaadan saxiixin. Si aad fikrad fiican uga hesho sida ay u shaqayso.
Kadib, waxaad riixi kartaa badhanka halkan si aad iskaga qorto Swagbucks.
Arag tani 10 Siyaabood Oo Lacag Loogu Siinayo Soo Dejinta Barnaamijyada
#14. Sahanka Junkie
Survey Junkie waa madal kale oo kuu oggolaanaysa inaad lacag ku hesho qaadashada sahanka. Sida Swagbucks, waxaad ku kasbataa dhibcaha ka dib markaad sahaminta qaadato. Qodobbadaas waxaa hadda lagu soo furan karaa lacag caddaan ah iyada oo loo marayo PayPal ama kaararka hadiyadda.
Maskaxda ku hay in kaashka ugu yar ee la bixiyaa uu yahay $ 10.
Guji badhanka halkan si aad iskaga diiwaangeliso junkie Survey.
BOOQO BAARITAANKA JUNKIE
Winn Dixie waa dukaan raashin iyo farmashiye dukaan ku dhex jira oo shaqeynayay ilaa 1925. Waxay u adeegayeen bulshooyinka iyaga oo marayay in ka badan 300 dukaan oo ku yaal Alabama, Florida, Georgia, Louisiana iyo Mississippi.
Waxaad codsan kartaa inaad ka shaqeyso Winn Dixie, oo ah qurxinta keegga. Laakiin marka hore hubi xafiiska kuugu dhow si aad u aragto shaqooyinka kuu bannaan.
Guji badhanka hoose si aad wax uga ogaato shaqooyinka laga heli karo Winn Dixie
BOOQO WINN DIXIE
Taco Bell waa meel kale oo shaqaaleysiisa 15-jirka. Makhaayaddan cuntada degdega ah waxaa lagu yaqaanaa inay u adeegto cuntooyin badan oo Mexico u waxyoonay, kuwaas oo ay ka mid yihiin: tacos, burritos, waxyaabo cusub iyo waxyaabo khaas ah, oo ay weheliyaan waxyaabo kala duwan oo ah “menu menu”.
Iyada oo leh in ka badan 7000 makhaayado, Waxaa jira fursado shaqo oo loogu talagalay qof kasta oo xitaa 15-jirrada waa la kireyn karaa. Si kastaba ha ahaatee, tani waxay ku xiran tahay gobolka.
Guji xiriirka hoose si aad wax badan uga ogaato gambaleelka Taco.
BOOQO TACO BELL
Runza waa makhaayad cunto degdeg ah lagu yaqaan sanduuqyo u gaar ah oo ay ku jiraan kaabash, burger, iyo shiilan dahab ah.
Iyada oo leh in ka badan 80 dukaan oo ka shaqeeya Midwest Runza waxay siisaa qof walba fursado shaqo. Waxay kaloo leeyihiin dukaan Runza halkaas oo aad ka heli karto funaanado, funaanado, Runzie iyo kuwo kaloo badan.
Iyada oo ku xiran gobolka, Runza waxay shaqaaleysiisaa 15-jir shaqaale ahaan.
Si aad u ogaato shaqooyinka laga heli karo Runza, guji badhanka hoose.
#18. Fadhiga Ilmaha
Aan hoos ugu dhaadhacno haadka xusuusta. Markii uu walaalkay dhashay, aad baan uga baqay inaan qabto. Hooyaday waxay ku celcelin jirtay hadallo ay ka mid yihiin “Waa ilmahaaga walaalkaa ah, waa inaad barataa sida loo qabto” iyo si fiican runtii maan baran.
Markaa haddii aad iga fiican tahay xannaanaynta carruurta iyo xannaanaynta carruurta, si kasta ha ahaatee, fadlan hore u soco oo ka kasbado xoogaa lacag ah.
Waxaad xayeysiin kartaa xirfadahaaga saaxiibbada iyo qoyska si ay u ogaadaan waxaad samayn karto. Tani waxay u noqon kartaa shaqo waqti-dhiman ah 15 jir.
Hy-vee waa silsilad ka mid ah dukaamada waaweyn ee gobolka MidWest. Waxay leedahay in ka badan 245 dukaan oo ku yaal Iowa, Illinois, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, South Dakota, iyo Wisconsin.
Dukaamada Hy-Vee ee ugu weyn waa dukaamo adeeg oo buuxa oo leh foorno, wax macaan, waaxyo ubax ah, adeeg cunto iyo cunno, khamri iyo jinni, farmashiyeyaal, rugaha caafimaadka, HealthMarkets (alaabta dabiiciga ah iyo kuwa dabiiciga ah), iyo dukaamada qaxwada (Kafee Caribou) iyo Starbucks).
Dukaan kasta si madaxbanaan ayaa loo maamulaa taas waa sababta ay qaar u kireystaan ​​15-jir halka qaarna aysan u kireyn. Markaa waxaad ka hubin kartaa maamulaha dukaanka xaafaddaada si aad u ogaato inay shaqaaleysiinayaan.
Guji badhanka hoose si aad wax badan uga ogaato Hy-Vee.
Akhri tan 15 Siyaabood oo Lacag looga Sameeyo Guriga Adigoo Ilmo ah
#20. Cunto Weyn
Dukaamada Raashinka ah waxaa laga helaa dhammaan bariga Maraykanka. Silsiladda raashinka ayaa aad ugu fiican shaqada waqti-dhiman, heerka gelitaanka iyo kuwa raadinaya xirfado waqti-buuxa ah tafaariiqda.
Waxaad u shaqayn kartaa sida Bagger, wehelka roodhida, lacag hayaha, karraaniga, wiilka kaydka ah, ama kaydiyaha.
Ka hubi dukaanka Giant Food ee xaafaddaada si aad u ogaato haddii ay furan yihiin. Ama guji badhanka hoose.
BOOQO CUNTADA GEANTIGA AH
#21. Barafka Talyaaniga ee Rita
Tani waa meel kale oo shaqaaleysiisa 15 jir. Barafka Talyaani ee Rita ayaa caan ku ah Mareykanka oo dhan si loogu adeego Barafka Talyaaniga, Jalaatada, Gelato, iyo qaar kaloo badan.
Iyada oo ka badan 600 goobood oo dukaanno ah oo ku yaal Maraykanka, Barafka Talyaaniga ee Rita wuxuu siiyaa fursado shaqo shaqsiyaadka hillaaca. Waxaa laguu qori karaa inaad u shaqayso sidii xubin kooxeed.
BOOQO BARNAAMIJKA TALYAANIGA EE RITA
Culver's waa makhaayad cunto degdeg ah oo gaar loo leeyahay oo si gaar ah loo leeyahay oo ka hawlgasha gobolka Midwest ee Maraykanka. Makhaayadda waxaa inta badan lagu yaqaan “Butterburgers” iyo waardiye barafaysan, laakiin waxay kaloo bixisaa curds farmaajo, digaag, kalluun, iyo saladh.
Iyada oo ku xidhan gobolka, culver-ka ayaa shaqaaleysiiya 15-jir si ay ugu shaqeeyaan sidii shaqaale shaqaale ama xamaali.
Guji xiriirka hoose si aad wax badan uga ogaato shaqooyinka laga heli karo Culver.
#23. Boqoradda Xusuus -qorka
Boqoradda Xusuus-qorka waa silsilad caalami ah oo jilicsan oo u adeegta jalaatada iyo maqaayadaha cuntada degdegga ah leh oo ay leedahay International Dairy Queen, Inc., oo ah shirkad hoos timaadda Berkshire Hathaway.
Shaqooyinka makhaayadani waxay ku kala duwan yihiin goobta. Iyada oo leh in ka badan 3000 laamood, waxaad filan kartaa inaad hesho shaqooyin sida nadiifiye ama khasnaji. Da'da ugu yar ee laga shaqeeyo inta badan goobaha Boqorada Caanaha waa 14.
Guji badhanka si aad wax badan uga ogaato Boqoradda Xusuus -qorka.
BOOQO DIARY QUEEN
Shaqooyinka kale ee waqti-dhiman ah ee 15-jirka ah waxaa ka mid ah;
Qofka gudbinta wargeyska
Qofka keena warqadda
Aynu isku soo duubno
Halkaas ayaad ku haysaa. Meelaha laga shaqaaleysiiyo 15. Laakiin markaa intaad shaqo raadinayso, Waxaa muhiim ah inaad abuurto dheelitir u dhexeeya dugsiga iyo saacadaha shaqada. Ha iloobin inaad tahay dhalinyaro u baahan nasasho.
Markaa dhex mar maqaalkan oo soo ogow fursadda shaqo ee kugu habboon. Markaad sameyso, horay u soco, codso, hel shaqada oo bilow inaad kasbato!
Waxaad sidoo kale arki kartaa Kuwaan…
11 Barnaamijyada Taleefoonka si aad lacag uga hesho mar kasta oo aad u baahato
15 Akhristayaasha ugu fiican ebook ee 2022 | Hel Maalin walba Waxsoosaar leh
10 Barnaamijyada Ugu Shaqaynta Badan Dibedda Adiga 2021
Miyaad ku riyoonaysaa inaad dibadda ka shaqayso? Haddii jawaabtaadu haa tahay, keligaa ma tihid. Waxaa jira kumanaan…
16 Goobaha Beddelka ee Mashiinka Ugu Fiican 2022
Haddii aad waligaa u baahnayd inaad soo ceshato raadadkii dhijitaalka ahaa ee aad lumisay waqti ka hor, ama haddii aad…